Kambodza: Volavolan-dalàna iray mamono ny fahalalahan’ny Aterineto · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Septambra 2019 13:18 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, Deutsch, Català, English
Ireo moanina tao amin'ny trano fanaovana Aterineto ao Phnom Penh. sary teo amin'ny Flickr an'i Magalie L'Abbé (License CC)
Ireo mpisera Kambodziana Aterineto sy ireo fikambanana mpiaro ny zon'olombelona dia manameloka ny volavolan-dalàna iray hanenjehana ny heloka an-tserasera (cybercriminalité ) izay misy fepetra mety hanimba amin'ny fahalalahana maneho hevitra.
Na dia nolavin'ny governemanta aza ny haneho hevitra mikasika ilay volavolan-dalàna, andininy faha-19, fikambanana iray mpiaro an'ireo media, miorina ao Londona, no nahazo dika tsy ofisialy tamin'ny teny anglisy avy amin'ilay volavolan-dalàna. Tamin'ny taona 2012, nambaran'ny governemanta ny fikasàny handany lalàna iray hanenjehana ny heloka an-tserasera, saingy tsy nanao fakàna ny hevitry ny maro momba ity tolokevitra ity izy tato anatin'ny taona roa farany.
Araka ny voalazan'ny Phnom Penh Post, gazety amin'ny teny anglisy mpiseho isanandro ao Kambodza, ny Vondron'asan'ny Filankevitry ny Ministra no nandrafitra ilay lalàna hanenjehana ny heloka an-tserasera.
Marobe ireo mpampiasa Aterineto no niampanga ireo fepetra famoretana tao anatin'ilay volavolan-dalàna, indrindra fa ny andininy faha 28 izay ny votoatiny dia “manohintohina ny fiandrianana sy ny maha-iray ny Fanjakan'i Kambodza”. Sahala amin'ny mbola tsy ampy izany, io fepetra io ihany koa dia manameloka ny famoahana anaty tambajotra izay “miteraka ny tsy filaminana, fikorontanana ary ny fitambarana ara-politika”. Zara raha misy ny fampahalalana vaovao ho an'ny vahoaka mikasika ny heloka bevava manohitra ny “fitambarana ara-politika”.
Manameloka ny famoahanaan-tambajotra an'ireo tahirin-kevitra azo heverina ho toy ny “tsy misy fotony” sy “manendrikendrika na mety hanala baraka ny maha-izy azy ireo masoivohon'ny governemanta, ireo ministera, ary tsy mijanona ho ireo ihany, sy ireo departemanta eo amin'ny sokajy ara-federaly sy eo an-toerana. Mety hanalefaka an'ireo tsikera atao amin'ireo solontenan'ny governemanta ihany koa ity volavolan-dalàna ity.
Mandrara ny famoahana an'ireo votoaty heverina fa “mety hanimba ireo soatoavina ara-moraly sy ara-kolontsaina eo amin'ny fiarahamonina” ihany koa ilay volavolan-dalàna. Faritan'ilay volavolan-dalàna ihany koa ny karazana famoahana an-tambajotra heverina ho mety hanimba:
Ireo soratra na ireo sary izay maneho olona manao asa tsy fia mety loatra, ny firaisana ara-nofo eo amin'ny olona sy biby na mampietry ny soatoavin'ny fianakaviana sy ireo sary mampiseho ny herisetra ao an-tokantrano.
Ity fepetra manokana ity dia mikendry ny hisakanana an'ireo mpanao sariitatra tsy hampiasa ny habaky ny aterineto mba hanelezana ny hafatr'izy ireo.
Ireo olona voatazona ho tomponandraikitra amin'ny fanaovana heloka bevava anaty aterineto dia ho voasazy handoa onitra 2 000 000 ka hatramin'ny 6 000 000 riels (500 hatramin'ny 1 500 dolara Amerikana). Soritan'ireo tsikera fa mavesatra kokoa ireo sazy hita ao anaty volavolan-dalàna raha mitaha amin'ireo sazy ampiharina amin'ireo fandikandalàna mitovy aminy saingy notanterahina tany ivelan'ny tambajotra.
Chak Sopheap, tale mpanatanteraka ao amin'ny Ivontoerana ho an'ny zon'olombelona ao Kambodza, no nanoratra fa ity volavolan-dalàna mikasika ny aterineto ity dia mety ho azo ampiasaina mba hilàna vaniny sy hanasaziana ireo mpanakiana ny governemanta.
Ilay andininy faha 28 dia zo ampiasaina hamandrihana an'ireo mpikatroka ho an'ny zon'olombelona na ny mpanohitra. Ohatra, marobe ireo mpampiasa aterineto no tena mpitsikera ary tsy mijanona amin'ny fihainoana feon-dakolosy tokana. Manana ny heviny manokana izy ireo.
Ny Fikambanana Andininy faha-19 dia mampitandrina fa ireo fahefana midadasika neken'ny fampanoavan'ny Repoblika amin'ny fikirakiràna ireo raharaha momba ny heloka an-tserasera dia mety hanohintohina ny fanajàna ny fiainana manokana ety anaty tambajotra:
Ireo mpampanoa lalàna, fa tsy ireo fitsaràna, no misitraka ny fahefana tena malalaka indrindra mba handidiana ny hitahirizana ireo angona informatika na ireo angona ara-tantara. Tena mampiahiahy izany noho ilay endriny mitsabatsabaka ananan'ireo fepetra ary tsy ananan'ireo mpampanoa lalàna ny fahaleovanteindrindra fa ny fiarovana ny zo hanana fiainana manokana.
Entanin'ilay fikambanana ny governemanta mba hanao fakàna hevitry ny maro sy mba hanova ilay volavolan-dalàna mialohan'ny handefasana azy eny amin'ny Parlemanta.
Sahiran-tsaina mafy amin'ilay volavolan-dalàna momba ny heloka an-tserasera ao Kambodza ny Fikambanana Andininy faha-19, volavolan-dalàna izay mifanalavitra amin”ireo fenitra iraisam-pirenena momba ny zo amin'ny fahalalahana maneho hevitra, hahazo vaovao ary ny hanana fiainana manokana. Raha toa lany amin'izao endriny ankehitriny izao izy io, dia loza lehibe mety hitranga ny hoe hikisaka mankany amin'ny kolontsain'ny tsiambaratelo lalina sy ny fanivanan-tena ny firenena.
Ny Aterineto dia voaporofo ho vovonana iray mahomby ho an'ny fizaràna sy fanaparitahana vaovao ary ireo fampahalalam-baovao mikasika ny fiainana ara-politika ao Kambodza. Nandritra ireo fifidianana tamin'ny taona lasa, nahitam-pahombiazana ny ezak'ireo antoko mpanohitra nitrandraka ny media sosialy mba handraisana ireo mpikatroka sy hahazoana vatom-pifidianana. Nokianin'ny tanora tamin'ny fomba malalaka tety anaty tambajotra ireo mpanao politika sy ny kolikoly ao amin'ny governemanta. Koa satria vatsian'ireo orinasa mpanaraka ny governemanta ireo fahitalavitra, tamin'ny Aterineto irery ihany no nitaterana ireo vaovao mikasika an’ireo fitokonana sy ireo fihetsiketsehana nataon'ny mpanohitra
Raha lany ilay volavolan-dalàna mikasika ny heloka an-tserasera, dia mety ho sakana ara-pitsarana iray goavana ho an'ireo mpanao gazety an-tambajotra, hanakana azy ireo tsy hamoaka amin'ny tambajotra ny lahatsoratr'izy ireo miresaka ireo olana mahakasika ny tombontsoam-bahoaka, ary ho an'ireo mpikatroky ny antoko politika [teny frantsay] izay mikatsaka ny hanakiana na hitaky fanovàna an'ireo mpitarika ara-politika. Raha lany io, dia mety hitondra sazy henjana ho an'ireo Kambodziana noho ireo tsikera nosoratany tety anaty tambajotra, amin'ny alalan'ny fameperana iray tena henjana atao amin'ny Aterineto sy ny sivana amin'ireo media sosialy.